China Copper Bhora Mugadziri uye Mutengesi |Lixin
Chrome Simbi Bhora
Carbon Simbi Bhora
Stainless Simbi Bhora
Tsono Roller Bearing
Kusundira Bhora Kutakura
Zvimwe Zvigadzirwa Zvekutengesa
Hunhu Hwakanaka 7/32inch 5.556...
Tine makore akawanda eruzivo mukugadzira mabhora emhangura nendarira.
Mabhora eBrass anopa kupikisa kwakanakisa pakuora nemvura, uye akadzikira zvakanyanya mumutengo pane mamwe mabhora asingadzivirire.Mabhora eBrass anowanzoshandiswa mumhando dzakawanda dzevharuvhu yekushandisa inoda mabhora madiki-saizi.
FOB Mutengo:$2.5 - 9,999 / Kg
Min.Order Quantity:1000 Kgs
Supply Ability:20000 Kgs pamwedzi
Tumira email kwatiri Dhaunirodha sePDF
Anenge akachena mabhora emhangura anonyanya kushandiswa mu galvanic application uye mumunda wemagetsi indasitiri.Bhora remhangura rakapfava saka riri nyore kudhiriwa, uye rinowanzo shandiswa muvharuvhu, jekiseni remafuta, sprayers, magaji ekumanikidza, mita yemvura, transmission system, jewellery, bracelet, mhete, necklace, touch-spot uye art ware.
Bhora rendarira Kuramba kwakanaka kwekuora mumvura yekunwa, mvura ine brackish, mvura yegungwa (kunze kwekuyerera kwepamusoro), mamiriro emunyu, zvigadzirwa zvepetroleum, doro.Fairish kuramba nekuremekedza acids uye alkali.Haisi kuramba kusangana ne hydroxides, cyanides, oxidizing acids.Semutemo wakajairwa, kuomarara kuramba kunoderera sezvo zinc yemukati inowedzera.
Bhora reMhangura Kuramba kwakanaka kwekuora mumhepo yemugungwa uye mumaindasitiri, chiutsi, alkali, mhinduro dzesaline dzakarerekera.Havarambi kusangana ne oxidizing acids, halogens, sulphides, ammonia, mvura yegungwa.
Packaging Nzira dzeBrass Bhora uye Copper Bhora
1. Shandisa zvidimbu zviviri zvehombodo dzakavharwa uye mabhokisi maduku, ayo akakodzera kutumira sampuli.Huremu huri pasi pe10kg.
2. Akaiswa mumakatoni ane mabhokisi madiki mana nemabhegi akavharwa, anorema pakati pe10kg ne25kg.
3. Yakaiswa mumabhegi akarukwa, ane zvidimbu zviviri zvemabhegi akarukwa uye maviri akaiswa masaga akavharidzirwa, anorema pakati pe25 kg ne40 kg.
4. Shandisa plastiki shell, isa 1 bhora mune yega yega kadhi slot, kudzivirira kudhumhana.Inokodzera mabhora epolish epamusoro uye mabhora makuru saizi.
5. Tinogona kutakura mabhora maererano nechikumbiro chako.
Tine maawa makumi maviri nemana evashandi vebasa repamhepo, kana iwe uchida mabhora, ndapota inzwa wakasununguka kubata vashandi vedu vebasa.
Tine zvakawanda zvezvitoro uye tinogona kuzvitumira mumazuva 1-2.Kana pasina bhora resimbi raunoda, tichaitumira mukati memazuva 5-7.
Isu tiri vagadziri, tine kodzero yekutengesa kunze, tinogona kukupa mutengo wakaderera uye mhando yepamusoro, uye tinogona kugamuchira mari yenyika dzakawanda.
Zvakapfuura: Bhora rendarira
Zvinotevera: Professional Factory yeChina Stainless Steel 302 mabhora
Pure Solid Copper Bhora
Diki Mhangura Mabhora
Mabhora Mhangura Yakasimba
NGUVA YEKUSHANDAMuvhuro-Chishanu: 9am kusvika 6pm Mugovera, Svondo: Yakavharwa
Bhora resimbi, H65 Bhora rendarira, H62 Bhora rendarira, Bhora rendarira, Diki Mhangura Mabhora, Pure Solid Copper Bhora,